အိပ်ခန်းထဲမှာ performance ကိစ္စများရုံတစ်ခုအဘိုးအိုရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ကုထုံး Aoife Drury (2018) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Harriet Williamson အားဖြင့်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 30 မေလ 2018
လေ့လာမှုတစ်ခု 36 နှင့် 16 ၏အသက်အရွယ်အကြားလူပျို၏ 24% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများကြုံတွေ့ခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများအိပ်ခန်းထဲမှာကိစ္စများရှိခြင်းမှဝန်ခံစစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့အားနီးပါး 25% နှင့်အတူ, 34 နှင့် 40 အကြားယောက်ျားတို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမကြာခဏအများပြည်သူဝိညာဏ်အတွက်အသက်ကြီးသူများနှင့် Viagra အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အတူပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်သူကိုဖွင့်ကျော် 50s မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေ့လာမှုမှာအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျား, လိင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ, တစ်အကွာအဝေးကြုံနေရလိင်အတွက်ခံစားမရှိခြင်း, လိင်မ arousal feeling, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုကြုံနေရ, အခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြသ အခက်အခဲ climaxing သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလွန်း climaxing ။
% 36 အကြားနှင့် 40 35 အောက်တွင်လူတို့၏% ကဤပြဿနာများ၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတွေ့ကြုံနေကြသည်။
Glasgow တက္ကသိုလ်ကနေလေ့လာမှု၏ဦးဆောင်ရေးသားသူဒေါက်တာ Kirstin Mitchell က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရေရှည်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ယုံကြည်သည် အထူးသဖြင့်လူငယ်လူတို့အဘို့အနာဂတျမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေး, ပေါ်မှာ။
ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေရဲ့လိင်မှကြွလာသည့်အခါ 'ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသောအားဖြင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့် unplanned ကိုယ်ဝန်တားဆီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့အများကြီးပိုကျယ်ပြန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစဉ်းစားရပါမည်။ ''
Lewis က, 32 သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်လေ့လာမှုမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြဿနာများစွာကိုခံစားခဲ့ရသိရသည်။ သူ Metro.co.uk ပြောထားသည်: 'ဒါဟာအိပ်ခန်းထဲမှာအမှန်တကယ်ပြဿနာဖြစ်လာပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူလုံးဝပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်' '။
Lewis ကသူ့ရည်းစားနဲ့အတူသွားခဲ့ရာဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်သူတို့ဖျော်ဖြေဖို့သူ့ကိုပယ်ဖိအားယူနိုင်ကြောင်းဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ ရုံပြဿနာကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် '' ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်လျော့နည်း '' ဟုခံစားရ လုပ်. အလှည့်အတွက်လိင်ပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။
လူဖြစ်ကြ၏ ဝေးလျော့နည်းဖွယ်ရှိမိသားစုဆရာဝန်သွားရောက် သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများထက်, ယောက်ျားသာနှစ်စဉ်မိသားစုဆရာဝန်မှခြောက်ကြိမ်သွားရသောမိန်းမတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆရာဝန်လေးဆယ့်တစ်နှစ်သွားရောက်လည်ပတ်အတူ။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးများအတွက်အလားအလာအကြီးအကျယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ထိုသို့ကိုလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ထွက်သည်ကိုရောက်ရှိနိုင်မခံစားရဘူးသောသူအလေးအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအနေဖြင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေခံစားနေရပြီးအများအပြားယောက်ျားဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအစိုးရကလုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကြေငြာခဲ့သည် အင်္ဂလန်မှာအားလုံးကျောင်းများအတွက်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးမသင်မနေရ။ လူငယ်များအစောပိုင်းအပေါ်သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ကျန်းမာဆက်ဆံရေး၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွန်သင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအရှက်မပါဘဲ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှငျ့ဆကျသှယျနှင့်အပြုသဘော, လေးစားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကရှိသည်ဖို့အတှကျ, ကအများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်။
Aoife Drury, ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး, ဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောမျှတသောအမြင်ပူဇော်ဖို့အရည်အသွေးမြင့်လိင် ed မပါဘဲ porn ရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းအပေါ်လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်မြင့်တက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်: 'လိင်ပညာရေးကင်းမဲ့သောသူလူငယ်ယောက်ျားတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကို (လိင်တံ၏အရွယ်အစားနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကြာရှည်ဟန်) တွင်ညစ်ညမ်းကြယ်များမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။
'ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် Self-လေးစားမှုပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်နှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ခက်ခဲတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုစေနိုင်သည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအနိမ့်လိင်စိတ်အတူရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကပူးပေါင်းလိင်နှင့်လိင်မစွမ်းဆောင်တိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျော်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်လာ၏အခွင့်အလမ်း သာ. , သူတို့ကမှန်မှန် porn စောင့်ကြည့်ဖို့စတင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားများ၏အသက်အရွယ် '' အဆိုပါအသက်ငယ်။
'' အဲဒီနေဆဲလိင်ပညာရေး, porn မှဝင်ရောက်ခွင့်များလွယ်ကူခြင်း, ပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းမှအရှိန်မြင့်လာတယ်ဖို့ဦးစားပေးကြည့်ရှုဘို့အလားအလာများနှင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များများအတွက်အကျိုးဆက်များန်းကျင်လိုအပ်ပိုပြီးသုတေသနပြုသည်။ ''
သို့သော်လူတိုင်းမအိပ်ခန်းထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြဿနာများကိုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မြင်သည်။ Kris တေလာ, အော့ကလန်တက္ကသိုလ်မှာပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား, ဒုများအတွက်ရေးသားခဲ့သည်: 'ညစ်ညမ်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအနေအထားကိုထောက်ခံကြောင်းသုတေသနများအတွက်အချည်းနှီးရှာဖွေနေတုန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများအမျိုးမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
'' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသူတို့တွင်သည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ကွော, အချို့ဆေးဝါးများတာ, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပါဝင်သည်အဖြစ်ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအချက်များ။ ' (မှတ်ချက် - ဂယ်ရီ Wilson သည်တေလာ၏အမြတ်ငွေကိုဤနေရာတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ (2017) "Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခက်အမှန်တရား" Kris တေလာရဲ့ Debunking
တစ်ဦး 2017 အဆိုအရ Los Angeles မြို့သုတေသနပြုလေ့လာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတဝိုက်အခြားလမ်း, porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူ 335 ယောက်ျားထဲက 28% သူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်နှင့်အတူ intercourse မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပိုမိုနှစ်သက်ကဆိုသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုရဲ့စာရေးဆရာ, ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause, အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းကြည့်တစ်ဦးတည်း masturbating သောအခါအမှုကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုကသူတို့ရဲ့သိသာအခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရှောင်ရှားနေသောယောက်ျားကစောင့်ကြည့်မယ်လို့အဖြစ်ပြီးသားပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ (မှတ်စု: နီကိုးလ်ပရပ်၏တောင်းဆိုမှုများကိုဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်)
ဟုတ်ပါတယ်, လိင်ဆက်ဆံလူကြီးများဖှ၏ဗီဒီယိုများ masturbating သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်မှားဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ သင်တစ်ဦးဖက်ကအကြောင်းပြောဆိုသို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့ရှာလွန်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားချက်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုပါကိစ္စကိုဒီရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေ 24 နှစ်အရွယ်ဂျက်သဘောတူ။ သူဟာသစ်ကိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိသောအခါသူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြုံတွေ့င်ကြောင်း Metro.co.uk သို့ပြောသည်။
ဟုသူကဆိုသည်: 'တစ်လပြီးနောက်သင်တန်ဖိုးမရှိသူကိုသင်စွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုင်ထင် - ဒီအောက်ဖက်လိမ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်နှင့်သင်အဆိုးတွေး start တခါ, သင်ပင်လျော့နည်းလုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
'' ငါသည်ဤအကြောင်းကိုငါ့အဖက်နှင့်ပြောဆိုသော (သူမကသူမမှားချင်ပါတယ်တစ်ခုခုမဟုတ်ခဲ့စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်) နှင့်ငါ၏အယုံကြည်ရသူငယ်ချင်းများကိုမှတက်ဖွင့်လှစ်။ ငါတကယ်ငါ့ကိုလှည့်ပတ်အောက်ပါတစ်ဦးအရိပ်ရပ်တန့်ရန်, ဤနှစ်ခုလုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တူသောဒါဟာခံစားရတယ်။ ''
'' ဒါဟာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ "လိင်တူချစ်သူ" ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မြေတပြင်လုံးယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ ''
သင်အိပ်ရာမှာလိုချင်တာတွေတောင်းဒါမှမဟုတ်ပြဿနာရှိမယ့်အခါ, တက်မပွောနိုငျလြှငျ, လိင်, မှိုင်းအဆင်မပြေ, မသက်မသာသို့မဟုတ်ပိုဆိုးပါလိမ့်မည်တဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
အဆိပ်ပုလ်လည်းသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှတက်မဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာသွားရာမှယောက်ျားတားဆီး, ဒီမှာနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်သံသရာအတွက်ပိတ်မိလုလင်တို့သည်ထားလိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသာဟောင်း blokes စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသောဒဏ္ဍာရီပြန့်ပွားနိုင်ပါ။
ဒါဟာသင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူစကားတစ်လှည်ဘာသာရပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာလဲဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်အိပ်ခန်းထဲမှာရုန်းကန်နေခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆက်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဘင် Edwards ကတစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာနည်းပြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပတ်လည်အမည်းစက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်နေသည်ဟုရှင်းပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများသည်အားနည်းချက်များမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသင့်သည်။ '' သူတို့ကတကယ်ကိုများများတွေ့နေရတယ်။ သင်အကူအညီလိုကြောင်းဝန်ခံခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးသင်ဆုကိုရိတ်ရမည်။
'' အမျိုးသားများအတွက်မကြာခဏသူတို့စိတ်ခံစားမှုကိုမပြသင့်တယ်လို့ခံစားရပေမယ့်ဖယ်အတ္တများကိုဝတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ဤကိစ္စများဖြေရှင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ''
အခြေခံအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု, အရှက်ကွဲကြီးမားသောလား-လူသတ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ ပွင့်လင်းရိုးသားနှင့်အပြန်အလှန်အပျြောအပါး၏မျက်နှာသာအတွက်သူတို့ကိုမြောင်း။